Mahery vaika ny dahalo ao miandrivazo Miaramila roa voatifitra, maty ny iray
Dahalo efa mpiady sy matianina amin'ny fitanana basy no nitifitra ireo miaramila roalahin'ny Tafika Malagasy ka maty tsy tra-drano ny iray, izay nitranga tany amin'ny faritra Mindrivazo, mialohan'ny faran'ny herinandro teo.
Voatifitra teo aminy sandriny havia sy tamin'ny tratra ny akaikin'ny fony kosa ilay naratra ka mbola tsaboina tanteraka. Efa mpiangaly amin'ny fitanana basy matoa mikendry ny fo toy izao ireo jiolahy. Dahalo iray izay nitifitra ireo kosa no maty voatifitry ny mpitandro naman'ireto lasibatra tao anatin'ny fifanjevoana raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny Jeneraly Jocelyn Rakotoson izay tomponandraikitra voalohany amin'ny hery Vonjy taitra manerana ny Nosy. Araka ny tafa manokana nifanaovana tamin'ity manamboninahitra ambonin'ny Tafika Malagasy sy ny Adjudant François izay mpiandraikitra lefitra ny serasera eo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena dia mahery vaika ireo dahalo ao Miandrivazo, raha voafehy tanteraka ny tany Betroka. Anisan'ny antony mampahazo vahana hatrany ny asan-jiolahy ao an-toerana ny fifamezivezen'ny omby halatra avy any Bongolava, Menabe, Amoron'i Mania sy Matsiatra Ambony ka lasa mifanafika mamaly faty ireo dahalo isam-paritra. Ireo rehetra ireo koa anefa samy mitily sy manao haza lambo ny mpitandro filaminana. Mitaky vondron-kery mahery vaika izay iarahana amin'ny manampahefana any an-toerana ary ny fitsarana izany, indrindra ny ady amin'ny dahalo ambony latabatra.